IHE MERE MARKET PLAY ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ NA GAM AKPORO - GWUO AHIA - 2019
Nchọpụta nsogbu Store Store na gam akporo
Onye ọ bụla nbipute ga-arụ ọrụ naanị na njikọta na ọkwọ ụgbọala. Software pụrụ iche bụ akụkụ dị mkpa nke ngwaọrụ dị otú ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gbalịa chọpụta otú ị ga-esi wụnye ngwanrọ dị otú ahụ na Epson Stylus Printer 1410, kpọọkwa Epson Stylus Foto 1410.
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Epson Stylus Foto 1410
Ị nwere ike ịrụ usoro a n'ụzọ dị iche iche. Nhọrọ ahụ dịịrị onye ọrụ ahụ, n'ihi na anyị ga-aghọta onye ọ bụla n'ime ha, ma mee ya n'ụzọ zuru ezu.
Ịmalite nyocha site na ntanetị ọrụ Ịntanetị bụ naanị nhọrọ ziri ezi. E kwuwerị, ụzọ ndị ọzọ dị mkpa naanị mgbe onye ọrụ ahụ kwụsịrị kwadoro ngwaọrụ ahụ.
Gaa na saịtị Epson
N'elu elu anyị na-achọta "Ndị ọkwọ ụgbọala na Nkwado".
Mgbe nke ahụ gasị, tinye aha nke ngwa ngwaọrụ anyị na-achọ. Na nke a ọ bụ "Epson Stylus Foto 1410". Push "Chọọ".
Na saịtị ahụ na-enye anyị naanị otu ngwaọrụ, aha ahụ dabara na nke anyị chọrọ. Pịa ya ma gaa na ibe dị iche.
Ozugbo enwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala. Ma iji mepee ha, ị ghaghị ịpị bọtịnụ pụrụ iche. Mgbe ahụ faịlụ na bọtịnụ ga-apụta. "Download".
Mgbe a na-ebudata faịlụ ahụ na .exe ndọtị, mepee ya.
Ebube echichi na-ekwupụtakwa nke ngwaike anyị wụnye ọkwọ ụgbọala. Anyị na-ahapụ ihe niile dị ka ọ dị, pịa "OK".
Ebe ọ bụ na anyị emeela mkpebi niile, ọ na-anọgide na-agụ nkwekọrịta ikike ma kwenye na usoro ya. Anyị pịa "Nabata".
Nchedo nke Windows OS na-achọpụta ozugbo na ọrụ ahụ na-agbalị ime mgbanwe, ya mere, ọ jụrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ n'ezie ime ihe. Push "Wụnye".
Echichi na-ewere ọnọdụ n'emeghị òkè anyị, n'ihi ya, chere naanị maka mmecha ya.
N'ikpeazụ, ọ dị gị mkpa ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ọ bụrụ na ụzọ gara aga yiri ka ọ dị mgbagwoju anya n'ebe ị nọ, ọ ga-adị mkpa ka ị gbanwee uche gị gaa na ngwanrọ pụrụ iche, bụ nke pụrụ iche na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ọnọdụ akpaka. Nke ahụ bụ, ngwanrọ dị otú ahụ na-agbakwụnye ihe na-efu, nata ya ma tinye ya. Ị nwere ike ịlele ndepụta nke ndị nnọchianya kachasị mma nke mmemme dị otú ahụ na ibe anyị na njikọ dị n'okpuru.
Otu n'ime ndị nnọchiteanya kasị mma nke nke a bụ DriverPack Solution. Ebe ọkwọ ụgbọala nke usoro a dị nnọọ ukwuu nke nwere ike ịchọta ngwanrọ n'ebe ahụ ọbụna na ngwaọrụ ndị na-akwadobeghị ogologo oge. Nke a bụ nnukwu okwu nke saịtị ndị gọọmentị na ịchọpụta software na ha. Iji mara onwe gi nke ọma na nuances niile nke ịrụ ọrụ dị otú ahụ, ọ ga-ezuru ịgụ isiokwu ahụ na weebụsaịtị anyị.
Onye na-ebi akwụkwọ ahụ nwere nọmba nke ya, dịka ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na kọmputa ahụ. Ndị ọrụ kwesịrị ịma ya naanị ibudata onye ọkwọ ụgbọala site na saịtị pụrụ iche. ID dị ka nke a:
Iji jiri data a mee ihe kachasị arụpụta, naanị gị mkpa ịgụ isiokwu na weebụsaịtị anyị.
Nke a bụ ụzọ nke na-anaghị achọ itinye ihe omume na ịga na saịtị. Ọ bụ ezie na a na-ewere usoro ahụ ka ọ ghara ịdị irè, ma ọ ka ga-aghọta.
Iji malite, gaa "Ogwe njikwa".
Chọta n'ebe ahụ "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
N'elu mpio ahụ, pịa "Ntọala Mbipụta ".
Ọzọ, họrọ "Ịwụnye onye nbipute mpaghara".
Port aka ekpe site na ndabara.
N'ikpeazụ, anyị na-ahụ onye nbipute na ndepụta nke usoro ahụ nyere.
Ọ na-anọgide na ịhọrọ aha.
Nyocha a nke ụzọ anọ dị ugbu a iji wụnye ọkwọ ụgbọala ahụ agwụla.